आइपिएल अक्सनका १० महँगा खेलाडी | Hamro Khelkud
बिहीबार, फागुन ६, २०७७
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२१ को अक्सन बिहिबार साँझ चेन्नईमा सम्पन्न भएको छ । अक्सनमा दक्षिण अफ्रिका अलराउन्डर क्रिस मोरिस सर्वाधिक महँगो मूल्यमा बिक्री भए ।
मोरिसलाई राजस्थान रोयल्सले आइपिएल इतिहासकै सर्वाधिक उच्च कीर्तिमानी रकम १६ करोड २५ लाख भारु खर्चियो । नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई पनि कुनैपनि टोलीले खरिद गरेनन् । अक्सनमा १० करोडमाथि ४ खेलाडी खरिद भए ।
अक्सनमा इंग्ल्यान्डका ओपनर जेसन रोय, एलेक्स हेल्स, अष्ट्रेलिया आरोन फिन्च, आदिल राशिद, मार्टिन गुप्टिल लगायतका चर्चित खेलाडी विक्न सकेनन् । मोरिसले अप्रत्याशित कीर्तिमानी मूल्य पाउँदा स्टिभ स्मिथ र डेविड मलान लगायतका केहि उच्च मूल्यको आशा गरिएका खेलाडी सामान्य मूल्यमा सीमित भए । आइपिएल अक्सन २०२१ का सर्वाधिक १० महँगा खेलाडी यस प्रकार छन् ।
१. क्रिस मोरिस – १६ करोड २५ लाख
दक्षिण अफ्रिका तीव्र गतिका बलिङ अलरान्डर क्रिस मोरिसलाई राजस्थान रोयल्सले १६ करोड २५ लाख भारुमा खरिद गरेको थियो । मोरिसलाई गत वर्ष बेंगलोरले १० करोड भारुमा अनुबन्ध गर्दै फुकुवा गरेको थियो । मोरिस तीव्र गतिसँगै तल्लोक्रममा ठूला सट खेल्न सक्ने क्षमता भएका खेलाडी हुन् ।
३३ वर्षिय मोरिसलाई खरिद गर्न अक्सनमा पन्जाब, राजस्थान, मुम्बई र बेंगलोरबीच उच्च प्रतिस्पर्धा भएपछि कीर्तिमानी मूल्य पाएका हुन् । गतवर्ष बेंगलोरबाट खेल्दै मोरिसले ९ खेलमा ११ विकेट लिएका थिए । उनी गतवर्ष १० करोडमा विकेका थिए । यस पटक न्यूनतम मूल्य ७५ लाख राखेका थिए ।
२. काइल जामिसन – १५ करोड
न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलिङ अलराउन्डर काइल जामिसनलाई बेंगलोरले १५ करोड भारु खर्चिर्दै टोलीमा भित्र्यो । निकै महत्वपूर्ण साथ हेरिएका जामिसनले अपेक्षा अनुसारनै उच्च मूल्य पाए । बेंगलोरले आफ्नो तीव्र गतिको बलिङ समस्या सुधार गर्न महँगो मूल्य खर्चिन पछि परेन । २६ वर्षिय जामिसनले तीव्र गतिसँगै तल्लोक्रममा ठूला सट प्रहार गर्ने गर्दछन् ।
गत वर्ष भारतविरुद्ध डेब्यू गरेका जामिसनले त्यसयता लगातार उच्च प्रर्दशन गरि रहेका छन् । भारतलाई ओडिआई र टेष्ट सिरिजमा क्लिनस्विप गराउन जामिसनले घरेलु मैदानमा डेब्यूका साथ उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । उनले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुबैमा लगातार उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । उनी पहिलो पटक आइपिएल अक्सनमा बिक्री भएका हुन् । अक्सनमा न्यूनतम मूल्य ७५ लाख मात्र तोकेका थिए ।
३. ग्लेन म्याक्सवेल – १४ करोड २५ लाख
आइपिएल अक्सनका अष्ट्रेलिया आक्रामक ब्याट्सम्यान ग्लेन म्याक्सवेल सर्वाधिक लक्की खेलाडी मानिन्छन् । म्याक्सवेललाई बेंगलोरले १४ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको थियो । म्याक्सवेल ठूला सटका लागि परिचित विश्व प्रसिद्ध फिनिसर हुन् । पार्ट टाइम स्पिन बलिङ गर्ने गर्दछन् ।
म्याक्सवेललाई गत वर्ष पन्जाबले १० करोड ७५ लाखमा अनुबन्ध गरेको थियो । तर खराब प्रर्दशनका कारण फुकुवा गरेको थियो । म्याक्सवेलको आगमनले बेंगलोरको फिनिसिङ लाइनअप झनै उत्कृष्ट बन्ने छ । म्याक्सवेलले आफ्नो न्यूनतम मूल्य २ करोड राखेका थिए ।
४. झेय रिचर्डसन – १४ करोड
अष्ट्रेलिया तीव्र गतिका बलर झेय रिचर्डसनलाई पन्जाबले अक्सनमा १४ करोड भारु खर्चियो । पन्जाबको गतवर्ष तीव्र गतिका बलरको प्रर्दशन निकै कमजोर रहेको थियो । २४ वर्षीय रिचर्डसनले हालसम्म आइपिएल खेलेका छैनन् । यसै महिना सम्पन्न बिग ब्यास लिगमा पर्थ स्कोचर्सबाट उनले सर्वोत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै सर्वाधिक विकेट लिने सूचिमा शीर्षस्थानमा थिए ।
रिचर्डसनले विग ब्यासमा १७ खेलमा २९ विकेट लिएका थिए । उनले पावरप्ले, मध्यक्रम र डेथ ओभर सबैमा उत्कृष्ट बलिङ गर्ने गर्दछन् । रिचर्डसन तल्लोक्रममा ठूलो सटको क्षमता राख्ने गर्दछन् ।
५. कृष्णप्पा गौवथम – ९ करोड २५ लाख
भारतीय अफस्पिन अलराउन्डर कृष्णप्पा गौवथमलाई चेन्नइले ९ करोड २५ लाख भारुमा खरिद गर्यो । कर्नाटकाबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने गौवथमलाई पन्जाबले यस सिजनमा फुकुवा गरेको थियो । गतपर्ष अधिकाम्स खेलमा बेन्चमा बसेका थिए ।
पन्जाबमा उनी ६ करोड २० लाखमा भारुमा अनुबन्ध भएका थिए । तल्लोक्रममा राम्रो ब्याटिङको क्षमता राख्छन् । अक्सनमा आफ्नो न्यूनतम मूल्य २० भारु तोकेका थिए ।
६. राइली मेरीडिथ – ८ करोड
अष्ट्रेलिया २४ वर्षिय राइली मेरीडिथ तीव्र गतिका बलरका रुपमा चर्चित खेलाडी हुन् । तीव्र गतिका बलर उनले बिग ब्यासमा होबार्ट हरिकेन्सबाट खेल्दै उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । अष्ट्रेलिया टोलीमा डेब्यूको पर्खाइमा छन् । राइलीलाई पन्जाबले ८ करोडमा अनुबन्ध गरेको हो । राइलीले आफ्नो न्यूनतम मूल्य ४० लाख भारु राखेका थिए ।
७.मोईन अली– ७ करोड
इंग्ल्यान्डका स्पिन अलराउन्डर मोइन अलीलाई चेन्नईले ७ करोडमा अनुबन्ध गर्यो । एक मात्र विदेशी कोटा खाली रहेको चेन्नईले अलीमाथि महँगो मूल्य खर्चेको थियो । अलीलाई बेंगलोरले टोलीबाट फुकुवा गरेको थियो ।
मोईन स्पिन बलिङका साथै तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । यसै साता सम्पन्न भारतसँगको दोस्रो टेष्ट खेलमा स्पिनर अक्षर पटेललाई लगातार तीन छक्का प्रहार गर्दै धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । अलीले न्यूनतम मूल्य २ करोड भारु थियो ।
८. शाहरुख खान – ५ करोड २५ लाख
पन्जाबले युवा फिनिसर शाहरुख खानलाई ५ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । ५ वर्षिय शाहरुख खानलाई किन्न अक्सनमा पन्जाब, कोलकाता, दिल्लीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
तामिल नाडुलाई यस सिजनको शैद मुश्ताक अली ट्रफी उपाधि दिलाउन शाहरुख खानले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । शारुख पार्टटाइममा बलिङ गर्ने गर्दछन् । शाहरुखले न्यूनतम मूल्य २० लाख रुपैयाँ तोकेका थिए ।
९. टम करन – ५ करोड २५ लाख
इंग्ल्यान्डका युवा अलराउन्डर टम करनलाई दिल्ली क्यापिटल्सले ५ करोड २५ लाख भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको छ । गतवर्ष उनले राजस्थानबाट खेल्दै अलराउन्ड प्रर्दशन गरेका थिए । राजस्थानले करनलाई न्यूनतम मूल्य १ करोड भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध गरेको थियो ।
करन इंग्ल्यान्डको सीमित ओभरको क्रिकेटमा पछिल्लो समय नियमित खेल्दै आएका छन् । उनले तीव्र गतिमा बलिङ गर्नुको साथैं तल्लोक्रममा ठूला सटको क्षमता राख्छन् । न्यूनतम मूल्य १ करोड ५० लाखत तोकेका थिए ।
१०. नाथन कुल्टर नाइल – ५ करोड
अष्ट्रेलिया तीव्र गतिका बलर नाथन कुल्टर नाइललाई मुम्बई इन्डियन्सले ५ करोडमा अनुबन्ध गर्यो । नाइलले तल्लोक्रममा राम्रो ब्याटिङको समेत क्षमता राख्छन् । यस सिजनमा मुम्बईले नै उनलाई फुकुवा गरेको थियो ।